Zụta Oge awa YouTube | Nweta 4,000 awa iji kpọnye ọwa gị
Olee uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụrụ awa YouTube?
Oge elekere YouTube: ntuziaka kacha
Na 2018, YouTube kwuputara ụkpụrụ nduzi ọhụrụ gbasara ịkpata ego, nke welitere ihe ndị okike ma ọ bụ ọwa ga-emerịrị. Dịka ntuziaka ndị a si dị, ndị okike niile ga-enweta oge elekere 4000 n'ime ọnwa iri na abụọ na ọwa ha iji tinye akwụkwọ maka ego. Na mgbakwunye na nke a, ha chọkwara inwe opekata mpe ndị debanyere aha 12. A kwadoro ntozu ntozu a maka ọwa niile na 1,000th February, 20. Nke a mere ka ọtụtụ ndị okike nwee nchegbu na mgbagwoju anya. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta oge elekere 2018. Otu ụzọ ka zụta awa elekere YouTube sitere na SoNuker.
N'isiokwu a, anyị ga-eduzi nyocha dị omimi nke awa elekere YouTube. Site na ozi ziri ezi na ngwaọrụ, ị ga-enwe ike chepụta atụmatụ ga-enweta gị oge nlele achọrọ maka ọwa gị.
Na-emebi awa 4000 nke oge nlele YouTube
Iji nweta awa 4000 achọrọ nke oge nlele YouTube, ihe mbụ ị ga-eme bụ ijide n'aka na vidiyo ndị ahụ bụ ọha. Vidiyo ọ bụla ị mepụtara n'oge gara aga, nke edobere na nzuzo ma ọ bụ hichapụ gị agaghị agụta n'ime awa 4000 a. Ọ bụrụ na ị na-ejide iyi dị ndụ, cheta ka edoghị ha ka ndị edeghị ya. Nke a bụ n'ihi na a gaghị agụ oge nlele nke iyi dị ndụ ma ọ bụrụ na etinyeghị ya na ndepụta vidiyo gị.
Ọ bụrụ n’ileba anya na ntuziaka YouTube, ọ na-ekwu na a ga-enwetarịrị oge elekere 4000 n'ime ọnwa iri na abụọ. Agbanyeghị, ọ bụchaghị ka ebipụta vidiyo ndị a n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga. Isi ihe ewepụrụ na ntuziaka YouTube bụ na ọ dị ndị na-ekiri ha kwesịrị ilele ha n'ime izu 12 gara aga.
Mgbe ị tụlere awa 4000, ịkwesịrị ikpebi ọnụọgụ vidiyo ị ga-eme n'ime otu afọ iji ruo ebumnuche a. Na mgbakwunye na nke a, ịkwesịrị iburu n'uche nkezi ọnụọgụ nlele achọrọ maka vidiyo ọ bụla yana ogologo vidiyo nke ọ bụla. A gaghị edozi okwu nke ilekwasị anya ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha n'isiokwu a iche iche. Mgbe ị na-agbalị iru ebumnuche gị nke awa elekere 4000, ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha ga-eji nwayọọ nwayọọ bulie n'onwe ya.
Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ mgbanwe dị na egwu ebe a, anyị nwere ike iche ihe ole na ole. Nke mbụ, vidiyo ọ bụla i mere n'ime ọnwa iri na abụọ na-eche na ọ na-enweta ọnụ ọgụgụ dị mma nke 'echiche dị ọcha'. Site na nlele dị ọcha, anyị na-ekwu na a na-ekiri nke ọ bụla n'ime vidiyo ndị a kpamkpam. Mgbe ị na-eme ngụkọ ahụ, anyị agaghị eburu n'uche vidiyo ndị ochie nke nwere ike imebi oge elekere gị na mberede ka ndị na-ekiri lechara ya.
Ịmepụta usoro iji nweta ebumnuche elekere elekere 4000
Ka anyị leba anya na mgbakọ na mwepụ nke iru awa 4000 nke oge nlele YouTube.
Maka ịmalite na ngụkọta oge, anyị maara na oge elekere 4000 ga-adaba nkeji 2,40,000. YouTube na-ahọrọ vidiyo ogologo nkeji 10, yabụ anyị kpebiri idobe nke a dị ka ntọala. Dabere na echiche na ozi ndị a kpọtụrụ aha, anyị nwere ike iru nkeji 2,40,000 n'ụzọ ole na ole.
Site n'ime vidiyo 2,40,000 nke na-ewe nkeji iri nke ọ bụla. Ebumnuche nke ọ bụla n'ime vidiyo ndị a bụ ịnweta nlele 10.
Site n'ime vidiyo 2,400 nke na-ewe nkeji iri nke ọ bụla. Ebumnuche nke ọ bụla n'ime vidiyo ndị a bụ ịnweta nlele 10.
Ọ bụ ezie na ọnọdụ nke mbụ bụ ihe na-agaghị ekwe omume, nke abụọ enweghị ezi uche. Ebumnobi kacha pụta ìhè ga-abụ ime vidiyo 240 nke na-ewe nkeji iri ọ bụla. Nke ọ bụla n'ime vidiyo ndị a kwesịrị ịchọ ihe dị ka nlele 10. Ọ bụ ezie na ebumnuche 100-elele siri ike iru maka onye mbido, a na-enweta ya site na ịme vidiyo dị elu yana enyi na-achọ. Ị nwekwara ike ịzụta oge nlele YouTube iji nyere gị aka na usoro a. Site na usoro ndị a nwalere ma nwalee, ị nwere ike ịmalite ịmepụta ọdịnaya dị mma.
Yabụ, na mmechi, usoro a bụ ịnweta nlele 100 nke ọ bụla na vidiyo 240 nke dị nkeji iri ọ bụla. Site na nke a, vidiyo ọ bụla ga-enweta ihe dị ka nkeji 10 YouTube nlegharị anya, nke dị ka awa 1,000. Mgbe anyị na-eme vidiyo 16.5 n'otu afọ, anyị nwere ihe dịka ụbọchị 240 fọdụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme vidiyo 125 kwa izu, ị ga-enwe ike imezu ebumnuche gị n'ụzọ dị mfe.
Agbanyeghị, enwere oke na itinye usoro a n'ihi na idobe echiche 100 na vidiyo ọ bụla bụ ebumnuche siri ike maka obere ọwa. Ị ga-edekọ, dezie ma wepụta vidiyo ụbọchị 5 n'izu, nke ga-ahapụ gị naanị ụbọchị 2 iji kwalite ọdịnaya gị n'ịntanetị maka nlele. Ndụmọdụ dị mma ga-abụ inyocha ọdịnaya vidiyo ọ bụla gara aga nwetara ihe dị ka nkeji oge elekere 1,000. Ị nwere ike ịgbalị ịmegharị ihe ịga nke ọma ahụ site n'ịzụlite nghọta nke ihe na-arụ ọrụ maka gị n'oge gara aga. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịtụle ịzụrụ elekere elekere 4000.
Nkwanye ndị ọzọ
E nwere ụzọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe nke imezu ebumnuche nkeji 2,40,000, dabere na oke mbọ na oge ịchọrọ itinye. Ị nwere ike ikpebi imepụta vidiyo 1 ruo 3 n'ime otu izu nke na-ewe nkeji 10 ruo 15 ọ bụla. . Na mgbakwunye na nke a, ị nwere ike ịmepụta iyi ndụ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa izu na-adịru nkeji iri isii. Buru n'uche, na ị ga-achọ ka ị na-agbaso àgwà na nkwalite nke ọdịnaya. Ndị a nwere ike iwepụta nsonaazụ ndị a n'ihe gbasara nkeji oge nche -
Vidiyo 1 kwa izu x nkeji 15 = nkeji 780 nke ọdịnaya vidiyo n'ime izu 52.
Vidiyo 2 n'izu x nkeji 15 = nkeji 1,560 nke ọdịnaya vidiyo n'ime izu 52.
Vidiyo 3 n'izu x nkeji 15 = nkeji 2,340 nke ọdịnaya vidiyo n'ime izu 52.
Vidiyo dị ndụ 1 n'izu x 60 nkeji = nkeji 3,120 nke ọdịnaya vidiyo na-ebi ndụ n'ime izu 52.
Vidiyo dị ndụ 1 otu ọnwa x nkeji 60 = nkeji 720 nke ọdịnaya vidiyo na-ebi ndụ n'ime izu 52.
Ị nwere ike iji nke ọ bụla n'ime nchikota ndị a ka iwelie oge elekere gị. Ọ bụrụ n’ịmepụta vidiyo 3 pụrụ iche n’otu izu yana 1 iyi ndụ n’ime otu ọnwa, ị ga-enwe ike ịnweta ihe dị ka nkeji 3,060 nke awa 51 nke ọdịnaya vidiyo. Iji ruo ebumnuche nke awa elekere 4000 na ọdịnaya a, ị ga-achọ ịnwe ihe nlele 78 na vidiyo ọ bụla. Agbanyeghị, ọ nweghị ụzọ iji hụ na ọnụọgụgụ a. Ebe ụfọdụ vidiyo nwere ike nweta ọtụtụ narị nlele, ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị erute akara nlele 50. N'ọnọdụ ndị a, ị nwere ike ịzụta awa elekere iji nweta uru ego ma nyere aka na uto nke ọwa gị.
Ndụmọdụ maka ịme vidiyo na-eme ka ihe ịga nke ọma n'oge nche gị
1. Mepụta Ọdịnaya Evergreen
Ọ bụrụ na ịgafe na ndekọ vidiyo gị, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ vidiyo ochie nke ka na-enweta ọtụtụ nlele. Dị ka onye na-eji ọdịnaya, a ga-enwerịrị ụfọdụ vidiyo ị na-alaghachi na-ekiri ugboro ugboro. Ndị a bụ ihe a maara dị ka vidiyo ọdịnaya mgbe ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye oge nlele gị na YouTube, ị kwesịrị ịtụle itinye ọdịnaya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na vidiyo gị. Ụdị vidiyo ndị a na-enwekarị ndị na-aza ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-achọkarị ịma. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịme vidiyo na-enye ụfọdụ ozi bara uru gbasara isiokwu ndị ama ama.
Ọ na-esikarị ike ịchọpụta na YouTube. Iji jide n'aka na ị pụta na nsonaazụ ọchụchọ YouTube, ị nwere ike itinye ụfọdụ ụdị ọdịnaya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Enwere ike ime nke a na mgbakwunye na ịzụrụ awa elekere 4000. Ị kwesịrị ịgbalị ịhọrọ isiokwu nke ndị mmadụ na-alọghachikarị na ya, dị ka nyocha maka ụfọdụ ngwanrọ, otu esi eme ma ọ bụ vidiyo ntụziaka maka ihe ụfọdụ, ma ọ bụ vidiyo egwuregwu. Vidiyo ndị a na-adịru ogologo oge n'ihe gbasara ịnweta oge nlele na nlele. Otú ọ dị, ọtụtụ na-adabere na ndụ shelf nke isiokwu. Mgbe ịnwe opekata mpe vidiyo 5 ruo 10 nwere ọdịnaya na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, o yikarịrị ka echiche gị ga-abawanye. Ma, ka echiche gị na-abawanye, ị ga-abịaru nso na ebumnuche gị nke awa elekere 4000.
2. Mepụta vidiyo ogologo
Ụzọ ọzọ dị mma isi mee ka oge nche gị dịkwuo elu bụ ịmepụta vidiyo nwere ogologo ogologo. Iji kọwaa nke a, anyị ga-ewere ihe atụ nke vidiyo abụọ nke ogologo dị iche iche. Ka anyị kwuo na vidiyo 1 dị ihe dịka nkeji 7-8 n'ogologo, ebe vidiyo 2 dị ihe dịka nkeji 47 n'ogologo. Vidiyo 1 dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ nwere ike ịnweta nlele 1,400-1,500, ebe vidiyo 2 dị ogologo nwere ike nweta naanị 450-500. Ugbu a, ka anyị kwuo na vidiyo 1 na-enweta ihe dị ka awa 69.2 nke oge nlele, ebe Video 2 na-enweta oge elekere 50.2.
Site na ọnụ ọgụgụ ndị e nyere n'elu, ọ nwere ike ịdị ka vidiyo 1 nwere ọnụ ọgụgụ ka mma n'ihe gbasara arụmọrụ. Otú ọ dị, arụmọrụ nke Video 2 ka ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche oge nche jikọtara ọnụ. Nke a na-egosi etu vidiyo nwere ike ịdị ogologo ogologo. N'agbanyeghị na nkezi oge elekere maka vidiyo dị ogologo dị obere, ha na-eme ya mgbe ndị na-ekiri vidiyo na-ekiri vidiyo ndị a zuru ezu ruo na njedebe. E wezụga nke ahụ, a na-ekekọrịta vidiyo ndị dị ogologo karịa karịa vidiyo ndị dị mkpụmkpụ. Ka ị na-ewepụta vidiyo ndị toro ogologo, ị nwekwara ike ịzụta awa elekere YouTube iji nyere aka na usoro iru ebumnuche gị nke awa elekere 4000 YouTube.
3. Mepụta Livestreams
Livestreams bụ nnukwu echiche iji bịaruo ebumnuche oge nche gị nso. Mgbe ịmalite na iyi ndụ, ị nwere ike ịchọpụta na ị na-enweta naanị mmadụ 50 ruo 100 n'ụbọchị mbụ. Isi ihe bụ ka ị na-apụta na iyi dị ndụ ma ị ga-ahụ ka ndị na-ekiri gị na-abawanye. Ka ndị na-ekiri gị na-abawanye, ị ga-enwe ike inwetakwu oge nche. Nke a pụtara ìhè mgbe anyị na-eme ụfọdụ mgbako dị mfe. Were ya na ị na-eji iyi ndụ dị ogologo awa 2, yana ị nwere ihe ruru mmadụ 600 na-ekiri ha, oge elekere ga-apụta ihe dị ka awa 1,200.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na YouTube na imepụta ọdịnaya, iyi ndụ nwere ike ọ bụghị nhọrọ kacha mma. Nke a bụ n'ihi na enwere ohere dị ole na ole ndị mmadụ na-elele iyi gị dị ndụ ma ọ bụrụ na ịnweghị akara edobere na oghere YouTube. Ị nwere ike ịtụle ịme iyi ndụ gburugburu ọnwa 6 ruo 9 ka ịmalitere njem ịmepụta ọdịnaya gị na YouTube. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ndị na-ekiri 20 n'ime vidiyo na-ewe otu awa, ị ka na-enweta oge nlele dị mma. Ịzụlite ndị na-ege ntị na-ewe oge. Agbanyeghị, ozugbo ị nwere ndị na-ege ntị raara onwe ha nye, ị ga-enwe ike ịhụ na vidiyo gị nwetara 'nlegharị anya dị ọcha'.
4. Zụrụ awa elekere YouTube
Ụzọ kachasị mma iji nweta ikike karịa maka ọwa YouTube gị wee nweta uru ego bụ site n'ịzụta elekere 4000 n'aka onye na-eweta ọrụ ziri ezi, dị ka SoNuker. Site n'itinye ọwa gị n'ụzọ ziri ezi, ị nwere ike iru ọkwa na-esote site na iji ezigbo okporo ụzọ, nkwalite, mbipụta akwụkwọ akụkọ, na mkpọsa. Mgbe ịzụrụ awa elekere YouTube, a na-ebugara gị ha n'ụdị nlele. Site na nlele dị elu na-abata mgbe niile maka vidiyo gị, ị ga-enwe ike iru ọnụ ụzọ nke awa 4000 wee nweta uru ego n'oge adịghị anya.
A na-enye awa elekere site na iji usoro dị iche iche maka ịzụ ahịa. Atụmatụ ndị a dabere n'ụdị ọwa na ogologo vidiyo. N'ọnọdụ dị mma, nnyefe nke awa 4000 na-agwụcha n'ime ụbọchị 14 kachasị ma ọ bụrụ na onye okike na-aga n'ihu na mmepụta vidiyo. Mgbe a na-ewepụta oge elekere achọrọ n'ụdị echiche dị elu, ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-ejigide ihe dị elu.
5. Mepụta vidiyo na-adịgide adịgide
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgafe ọnụ ụzọ ahụ nke awa elekere 4000, ihe ikpeazụ mana ihe kachasị mkpa ị ga-eme bụ ịnọgide na-emepụta ọdịnaya mgbe niile. Ịmepụta vidiyo nje nwere ike inye ọwa gị nkwalite na mberede, ma ị nwere ike nweta ọtụtụ nlele n'otu vidiyo ma ọ bụ abụọ n'ihi otu vidiyo nje. Agbanyeghị, ị kwesịrị ịgbalị ịchụso ọdịnaya ka mma mgbe niile. Ị kwesịrị ịgbalị imeziwanye akụkụ ọ bụla nke imepụta ọdịnaya mgbe niile, ma ọ bụ ndezi, aha ọma, ma ọ bụ àgwà nke obere mkpịsị aka. Gbalịa mee ebumnuche maka mmụba pasent 1 ruo 2 oge ọ bụla.
Ọ ga-abụ ezi echiche ịmegharị ụdị ọdịnaya nke na-enye gị akara ngosi dị mma. Mgbe ị na-emepụta vidiyo dị mma mgbe niile, a ga-ekekọrịta vidiyo gị na ndị na-ege ntị ziri ezi ma ị ga-enwe ike nweta ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji zụta oge nche site na SoNuker.com
Ọ bụ ezie na usoro na ngụkọ nwere ezi uche na akwụkwọ, ngwa ha bara uru na-enwe nsogbu ụfọdụ. Maka mmalite, iwepụta echiche maka ọdịnaya vidiyo chọrọ oge na ume dị ukwuu. Ịmepụta vidiyo ndị dị elu ugboro 5 kwa izu nwere echiche dị mma mgbe niile nwere ike ime ka ahụ gị na-agba gị ọkụ. Ka oge na-aga, ọ ga-ewepụ ike okike gị. Nke a bụ ebe SoNuker na-abata.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye na mmemme mmekọ YouTube wee nweta uru ego, SoNuker nwere ike inyere gị aka imezu ebumnuche elekere elekere 4000. Ịzụ oge nche na-adị mfe site na ọrụ adịchaghị nke anyị na-enye. Anyị nwere nhọrọ atọ maka ịbawanye awa elekere. Ị nwere ike ịhọrọ nke ọ bụla n'ime atọ ahụ iji mee ka ohere ị nweta ego, ma debe onwe gị n'ụzọ nke ịga nke ọma -
1,000 YouTube elekere - $300
2,000 YouTube elekere - $450
3,000 YouTube elekere - $550
Anyị na-akwado nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche dị ka MasterCard, Visa, yana Bitcoin. Site na nkwa nke SoNuker, ị ga-enwe ike iru awa 4000 ngwa ngwa. Ị ga-enwe ike ịhụ nsonaazụ ya n'ime awa 24 ruo 72 nke itinye iwu ahụ. Ị ga-ahụ mmụba na-aga n'ihu na oge nche ruo mgbe nnyefe zuru ezu. Ọrụ a na-arụ ọrụ kacha mma maka vidiyo nwere ogologo nkeji iri na ise ma ọ bụ karịa. Site na awa elekere ndị a, ị ga-enwe ike ọ bụghị naanị ịbawanye ọkwa gị na YouTube kamakwa na Google Search.
SoNuker na-abịa na nkwa njuputa. Ọ bụrụ na oge nche gị dara n'okpuru ego enyere iwu ka ebufechara, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-ekwe nkwa na ị ga-ejuputa iwu gị n'efu. Ọrụ a dị maka otu afọ mgbe itinye iwu. Ọtụtụ ndị ahịa SoNuker, ndị jirila ọrụ anyị n'oge gara aga, na-ekwu na YouTube kwadoro vidiyo ha n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ha nwere ike iji ọrụ anyị nweta uru ego n'ime izu ole na ole nke itinye akwụkwọ na Mmemme Mmekọ YouTube.
Anyị na-enye nkwado 24/7 ebe a na SoNuker maka ajụjụ gị niile gbasara ọrụ anyị. SoNuker.com bụ 100% nzuzo na nchekwa, nke nyegoro ihe karịrị ndị otu 1,000,000 ọrụ. A na-echekwa nchekwa gị na nzuzo gị site na koodu siri ike anyị mepụtara maka weebụsaịtị anyị, nke na-eji nzuzo 256-bit.
So zụta oge elekere YouTube taa, ma lelee ka ọwa gị na-amalite ito eto!
A na-etinye Hourshave YouTube na ụgbọ ibu gị.